डा. मंगलसिद्धि मानन्धर | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. मंगलसिद्धि मानन्धर
डा. मंगलसिद्धि मानन्धर
प्राडा मङ्लसिद्धि मानन्धर सन् १९४३ मा काठमाडौंको न्यूरोडमा जन्मिएका हुन् । उनले स्न १९६४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोल विषयमा स्नातकोत्तर र सन् १९७३ मा अमेरिकाको ओक्लहोमा विश्वविद्यालयबाट सोही विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा प्राध्यापन गरेका मानन्धरले एक दशकभन्दा बढी समय त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस भूगोल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । नेकपा एमालेको नौ महीने शासनकालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका मानन्धरले त्यसपछि पनि एकपटक उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारमा शिक्षामन्त्री बनेका मानन्धर हाल संविधानसभा सदस्य छन् ।
सङ्घीयताको मुख्य आधार पहिचान नै हुनुपर्छ
राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले सङ्घीयताका आधारहरुमध्ये पहिचानलाई प्राथमिक आधारका रुपमा लिएको छ । यो पहिचानले जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक पक्षलाई र अवस्थाको हिसाबले भौगोलिक/ क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता भएकालाई लिएको छ । अर्को आधारमा सहयोगीका रुपमा सामर्थ्यलाई लिइएको छ । सामर्थ्य भन्नाले आर्थिक गतिविधि र अर्थोपार्जनको सामर्थ्य, त्यस भूक्षेत्रको पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई मानिएको छ ।
पहिचानलाई भन्दा सामर्थ्यलाई बढी महत्व दिनुपर्छ र प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा सबल, प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्धता दृष्टिले समान रुपले युक्त र पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने समितिको प्रतिवेदनको मूल पक्ष हो । योभन्दा फरक विचार पनि धेरैको रहेको पाइन्छ । पहिचानविना सङ्घीय निकायको निर्माण हुन सक्दैन । सामर्थ्य त भविष्यमा पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को सशक्त विचार छ । यो विचार राख्नेहरु पूर्वाधारको यथेष्ट विकास नै नभइसकेको नेपालमा ‘सम्पन्न’ प्रदेशहरु निर्माण गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने तर्क राख्छन् ।
नेपालमा हाल जम्मा १७ हजार ४ सय ३३ किलोमिटर सडक छ । यसमध्ये १ हजार ४ सय ४५ दशमलव ३ किलोमिटर काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित छ । अहिले पनि केही जिल्लालाई सडकले जोड्न बाँकी नै छ । हालै घोषणा गरिएका ४१ ओटा नगरपालिकासमेत गरी जम्मा ९९ ओटा मात्र शहर छन् । र, शहरमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्या अहिले पनि २० प्रतिशत पुगेको छैन । यस्तो स्थितिमा पूर्वाधारको आधारमा पहिचानलाई गौण राख्ने तर्क उपयुक्त देखिँदैन ।
आर्थिक सबलताको कुरा गर्ने हो भने नेपालको विकास बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत विदेशी सहायतामा निर्भर छ । आर्थिक वर्ष२०६२/६३ को राजस्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौंले मात्र कुल राजस्वको ४१ दशमलव २ प्रतिशत उठाएको देखाएको छ । पर्सा जिल्लाबाट २४ दशमलव ८ प्रतिशत, मोरङ, रुपन्देही र झापाबाट १४ दशमलव २ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरबाट ५ प्रतिशत र बाँकी ६८ जिल्लाहरुबाट १४ दशमलव ८ प्रतिशत उठेको देखिन्छ । उठाएको कुल राजस्वमा नेपाल सरकार (केन्द्र)ले ९४ दशमलव १ प्रतिशत र जिल्ला, नगरपालिका र गाउँविकास समितिले मात्र ५ दशमलव ९ प्रतिशत उठाएको देखिन्छ ।
राज्य पुनःसंरचना भनेको आर्थिक सबलताको आधारमा पुनःसंरचना गर्ने होइन । बरु, राजस्व सङ्कलनको व्यवस्थालाई पनि पुनःसंरचना गर्नु हो । प्रदेश र स्थानीय सन्यन्त्रलाई बढी प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार दिएर स्थानीय तहमा हुने हालको ६ प्रतिशतलाई बढाएर कम्तीमा ३० देखि ३५ पुर्याउने उद्देश्य राज्य पुनःसंरचनामा राखिनुपर्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै सङ्घीयतामा गएका देशहरुमा जति तल्लो निकायलाई राजस्व सङ्कलन गर्ने बढी अधिकार दिइएको छ त्यहाँ सङ्कलनको मात्रा र राजस्वका स्रोतहरु पनि बढेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकार (केन्द्र)ले सङ्कलन गरेको राजस्व पनि विभिन्न तरीकाले प्रदेशहरुमा फेरि वितरण गरिन्छ । धेरै सङ्घीय देशहरुमा राष्ट्रिय वित्तीय आयोग बनाएर त्यसमार्फ प्रदेशहरुमा आर्थिक स्रोत वितरण गर्ने चलन छ । भारतमा पनि यस्तै प्रक्रियाले बजेट बाँड्ने चलन रहेको छ । पाकिस्तानको वित्तीय आयोगले सन् २००१ मा जन सुविधा विकासलाई ८२ प्रतिशत, गरिबीलाई १० दशमलव ३ प्रतिशत, टयाक्स सङ्कलनलाई ५ प्रतिशत, धेरै क्षेत्र थोरै जनसङ्ख्यालाई ५ दशमलव ७ प्रतिशतको बजेट दिएर केन्द्रले प्रान्तहरुलाई अनुदान पनर्वितरणको व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रले विभिन्न किसिमबाट सङ्घीय निकायहरुमा आर्थिक सहायता पुर्याउने काम गर्छ । अमेरिकामा सन् २००९ मा ‘क्याटलग अफ फेडरल डोमेष्टिक असिष्टेन्स’ले २ सय ५० ओटा (सूत्र) पद्धतिमा आधारित १३ सयभन्दा बढी आयोजनामा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये एक तिहाइ निश्चित स्थानहरुको राष्टिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय महत्वका निम्ति पठाइयो । झण्डै दुइ तिहाइ सङ्घीय अनुदान कम आम्दानी हुने व्यक्ति र परिवारमा वितरण भयो । केन्द्रबाट राज्यहरुमा गएको अनुदान सम्पूर्ण सहयोगको झण्डै ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य सेवाका लागि केन्द्रीय सरकारबाट दिइआएका विभिन्न आर्थिक सहयोगबारे हामीलाई विदितै छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी सन् २००९ मा अफ्रिकी मुलुक केन्याले एउटा नयाँ कानून पास गर्यो । यसले प्राकृतिक स्रोतबाट हुने कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार र ४० प्रतिशत प्रान्तहरुमा बाँड्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ४० प्रतिशतमध्ये पनि १० प्रतिशत स्थानीय समुदायलाई दिने व्यवस्था छ । यो कानून प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको असमानताबाट अशान्त नहोस् भनेर गरिएको हो । प्राकृतिक स्रोत र साधनको कहिल्यै पनि क्षेत्रहरुबीच समान वितरण हुन सम्भव छैन ।
त्यसैकारण मुलुकभरको प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको न्यायोचित वितरण गर्ने दायित्व सङ्घीय देशहरुमा केन्द्रलाई दिएको हुन्छ । सङ्घीय सरकारको प्रमुख दायित्व देशको हरेक नागरिकले सेवा, सुविधा न्यायोचित र समान रुपमा उपयोग गर्न पाओस् भन्ने हुन्छ । यही उद्देश्यका लागि सङ्घीय सरकारले विभिन्न उपायहरु अपनाउने र स्रोत स्थानान्तरण गर्छ । यसकारण नेपालको सङ्घीय स्वरुप निर्माणका क्रममा अनावश्यक रुपमा सामर्थ्यलाई अघि सारी पहिचानलाई गौण गर्ने तर्क उचित छैन । यसले देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा देखिएका समस्याको सम्बोधन पनि हुँदैन ।